Lamba Inspection Machine
Edge kase Machine
Global Textile milina Market 2018-2022
Ny Global Textile milina Market mitombo amin'ny CAGR ny 8,28% mandritra ny fe-potoana 2018-2022.
Ny Global Textile milina Market 2018-2022, efa voavoatra mifototra amin'ny tsena in-famakafakana lalina amin'ny inputs avy amin'ny orinasa manam-pahaizana. Ny tatitra tontolo manarona ny tsena sy ny fivoarana fanantenana nandritra ny taona maro ho avy. Ny tatitra koa dia ahitana ny fifanakalozan-kevitra manan-danja ny mpivarotra miasa ao amin'ity tsena.
Araka ny tatitra, mpamily iray fiantraikany tsena ity dia ny fiakaran'ny tinady ho an'ny tsy-tenona lamba. Nonwoven lamba dia hoatr'izany lamba vokatra izay homarinana avy amin'ny foto fohy na lava kofehy mitohy kofehy, amin'ny fampiasana milina simika na firaiketam-po teknika, ary tsy tenona na ba nataony. Non-tenona lamba no vokarina ny haingam-pandeha sy ny vidiny ambany-dingana.
Fironana iray miantraika tsena ity dia ny automatique amin'ny lamba milina. Automatique Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny vidim-mifaninana amin'ny orinasa mpamokatra entana lamba. Milina mandeha ho azy lamba accelerates famokarana lamba sy mampitombo ny fizotran'ny tahan'ny lamba, amin 'izany manampy mahia orinasa mpamokatra entana. Automatique Mitana anjara toerana manan-danja iray ao amin'ny fibre orinasa mpamokatra entana, kofehy orinasa mpamokatra entana, nanenona, Fandokoana, ary ny dingana famaranana.
Ankoatra izany, ny tatitra milaza fa fanamby iray mahakasika tsena io no avo kofehy landihazo vidin mahakasika orinasa. Cotton dia iray voalohany ny akora ho kofehy orinasa. Ny fitomboan'ny landihazo vidin-javatra misy fiantraikany ny indostrian'ny lamba ny rehetra.
Address: 1.NO.28, Qianjia Industrial Park, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, Sina